Thenga Uhlu lwe-imeyili Yezilwane | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwe-imeyili Yezilwane
Ikheli le-imeyili Yezilwane
Uhlu lwe-imeyili yezilwane oluvela kodokotela bezilwane baseMelika imininingwane ephelele yokuxhumana. Ungafinyelela kalula kudokotela wezilwane usebenzisa lolu hlu lweposi yezilwane. Ikheli lokuxhumana ngezilwane lizokukhombisa ukubuya kwemali okulindelwe ukuyithengisa nge-imeyili.
Njengomhlinzeki wedatha ye-Mailing yakamuva, isiqondisi sethu sezilwane senzelwe ukuxhumana okufika ngesikhathi, okuhleliwe nokucelwayo ngama-imeyili enziwa ngabantu, ama-imeyili aqondile, kanye nemikhankaso yokuthumela izingcingo. We at Latest Mailing Database has aongedza Veterinarians Email Email Amakheli ngezinkulungwane zemininingwane eqinisekisiwe nevumayo yokusiza laba abathengisi bezempilo abaswele nabaphathi bezentengiso ukulwa nezinselelo zedatha okungenzeka ukuthi babhekene nazo ekuxhumaneni nodokotela bezilwane.
Ngemininingwane yabantu bezilwane ezingaphezu kuka-12,000 kulo lonke elase-US, Canada, UK nakwamanye amazwe, singabahlinzeki abaholayo bemininingwane yokuhlinzekelwa kwezempilo esezingeni eliphakeme. Abakhangisi bezokunakekelwa kwempilo bangaxhumana namathemba abo ngohlu lwethu lokuxhumana lwezilwane i-Medicoleads 'ezingakusiza ukumaketha imikhankaso yakho ngempumelelo ngokuxhuma wena odokotela bezilwane emhlabeni wonke.
Thenga Izinhlu Zokuxhumana Zezilwane
Thenga lolu hlu lwabathintekayo bezilwane bese uqala ukuxhumana nabantu ochwepheshe abasebenza eduze nezilwane kulo lonke elase-US ngemuva kokuchofoza nje okumbalwa. Uhlu lwethu lwe-imeyili yezilwane ligcwele imininingwane yokuxhumana oyidingayo, kusukela kumakheli e-imeyili wezilwane kuya ezinombolweni zefekisi, futhi ingakusiza ekwakheni ukuxhumana okuningana nabachwepheshe okungenzeka babe nentshisekelo ngomkhiqizo noma insizakusebenza yakho yezilwane. Ukushayela kalula ne-imeyili kuholela usebenzisa amakheli we-imeyili wezilwane aqinisekisiwe, aqinisekiswe ngabantu.
Manje manje qala imikhankaso yakho ku-Veterinary. Phezu kwayo yonke imininingwane yohlu lwe-imeyili. Sithengisa ikhophi elihlukile kunoma iyiphi imininingwane yethu. Ikhophi eyodwa yeklayenti elilodwa. Bona imininingwane eminingi: i-database yethu yezilwane isiza ekuthatheni umkhiqizo wakho nezinsizakalo eziya kodokotela bezilwane abagunyaziwe nabenza izinqumo zokulwa nokuncintisana kwemakethe kanye nezinye izinselelo.I-imeyili Veterinarians Email Database iyindawo ekahle yokutshala imali yabakhangisi bezokunakekelwa kwempilo, izinkampani zemithi, abaqashi, njll. Uhlu lusesikhathini futhi uhlu lokuxhumana lwezilwane oluhlanzekile oluvela e-USA Uma ufuna ukwakha olunye uhla lokuxhumana lwezilwane sicela usazise. Sizokusiza ukuthi wakhe uhlu lwakho lwe-imeyili yezilwane okuhlosiwe.
Umbuzo Nempendulo Yohlu Lwama-imeyili Wezilwane